Maty teo amin’ny faha-77 taonany ilay Rosiàna mpamokatra sarimihetsika, Sergei Solovyov dies at 77 · Global Voices teny Malagasy
Tena niezinezina ny asa naha-tale-na teatra sy sarimihetsika an'i Solovyov
Voadika ny 15 Desambra 2021 7:25 GMT
Sergei Solovyov tamin'ny 2017. Sary an'i Svklimkin, CC BY-SA 4.0, tao amin'ny Wikimedia Commons.
Maty noho ny fitsaharan'ny fitepon'ny fony i Sergei Solovyov, Rosiàna talen'ny famokarana sarimihetsika fanta-daza tamin'ny fahombiazany tany amin'ny andian-taona 1980s tany. 77 taona izy tamin'ny fotoana nodiany mandry, ny 13 Desambra.
Fantatra bebe kokoa i Solovyov tamin'ireo sarimihetsika novokariny manoritsoritra ny fiovàna nahamay teo amin'ny fiarahamonina rosiàna sy sôvietika, nitranga tany amin'ny faramparan'ny andian-taona 1980, vanimpotoanan'ny perestroika (vanimpotoana nanavaozana ny rafitra politika sy toekarena) sy ny glasnost, fanavaozana pôlitika naroson'ny filoha Sôvietika Mikhail Gorbachev.
Ny sarimihetsika tena be mpiresaka indrindra vitan'i Solovyov, Assa, dia nivoaka tamin'ny 1987, nambabo tanteraka sy niraikitra tam-pon'ny vahoaka sôvietika, nitondra ireo hevitra fanovàna ara-pôlitika sy ara-piarahamonina ho any amin'ny daholobe. Noho ny fomba fijery andrana narosony momba ny fitantaràna, nanasongadinany ireo ampahany misy nofinofy sy ireo fanamarihana eny ambanin'ny pejy manazava ireo tenin-jatovo fampiasa any an-katakonana, ireny no nahamarihana ilay sarimihetsika. Ny feonkira famantarana azy dia nandrenesana ireo hira an'ilay mozisiàna malaza mpiangaly gadona rock sôvietika Viktor Tsoi sy ny tarika nisy azy Kino ary feon-javamaneno nataon'ilay iray nalaza, Boris Grebenshchikov (malazan'ny Aquarium ). Noraràn'ireo Sôvietika manampahefana ny mozikan-dry zareo talohan'ny nivoahan'ny sarimihetsika novokariny, ary lasa endrika manandanja amantarana ny fahafahan'ny tontolon'ny rock sôvietika i Assa.
Androany ilay sarimihetsika dia afaka jerena ao amin'ny tranonkala ôfisialin'ny “Mosfilm film studio“, sy ao amin'ny YouTube (miaraka amin'ny fandikanteny anglisy).
Nanana asa niezinezina tokoa i Solovyov tamin'ny naha-tale, mpanoratra tantara an-tsehatra sy mpamokatra azy, nefa koa nanatontosa seho an-tsehatra maro. Nandritra ny fotoana elabe niasàny, 30 mahery ireo sarimihetsika vitany, ary ilay tamin'ny 2020 no tena akaiky indrindra. Tao Berlin tamin'ny 1975, ny sarimihetsika novokariny “One Hundred Days After Childhood” – Zato Andro Taorian'ny Fahazazàna – dia nahazo ny loka Silver Bear ( Orsa volafotsy) natao ho an'ireo tale mendrika indrindra, raha ny “The Stray White And The Speckled” -Ilay Fotsy Very sy ilay Sada – kosa nahazo ny loka manokana nandritra ny Fetiben'ny Sarimihetsika tao Venise tamin'ny 1986. Tamin'ny 1993, natolotra ho an'i Solovyov ny anaram-boninahitra Mpanakanton'ny Vahoaka ao Rosia.